Mogadishu Journal » 2019 » October » 24
Golaha Aqalka Sare oo ansixiyey sharci cusub iyo xubin lagu hor dhaariyey
Mjournal :-Golaha Aqalka Sare BFS ayaa ku yeeshay xarunta Aqalka Sare Kalfadhiga 6aad kulankiisa 3aad ayadoo Ajandaha kulanku ayaa ahaa: 1. Akhrinta 2aad ee Hindise-Sharciyeedka Dakhliga Guud ee Qaranka. 2.Ansixinta Xubin Cusub oo kamid noqaneeysa Guddiga Madaxa Banaan ee...
Waa kuma xiddiga Liverpool Laf-Dhabarta ka noqday Ee Ay Arsenal doonaysay
Mjournal :-Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa shaaca ka qaaday in kooxdiisu ay doonaysay saxeexa khadka dhexe ee Liverpool ee Fabinho kahor intii aysan kooxda Anfield heshiiskiisa dhammaynin xagaagii 2018. Fabinho iyo Emery ayaa kusoo xifaaltamay horyaalka France ee...
AMISOM oo dad beeralay ah ku dishay Shabeelaha Dhexe
Mjournal :-Kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa maanta qarax miino waxaa lagula eegtay degaanka Buurane oo ka tirsan degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel beero ay ku yaallaan, islamarkaana ay joogeen dad Shacab ah....
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay Shir Madaxeedka Ruushka iyo Afrika ayaa soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee haatan horyaalla labada dhinac. Madaxweynaha ayaa si qoto dheer uga...
Howlgal dad lagu qab qabtay oo laga sameeyey Jowhar
Mjournal :-Booliska magaalada Johwar ee xarunta Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa howlgallo isbajoog ah ka sameeyey xaafadaha kala duwan oo magaaladaas ka kooban tahay. Howgaladan ayaa u jeedkoodu waxaa uu yahay in Amniga lagu xaqiiyo iyada oo ciidanku foojig naan dheeraad ah...
Xog-hayaha Guud ee IGAD oo la Magacaabay
Mjournal :-Abiy Axmed Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa u magacaabay Xoghayaha Guud ee IGAD Workneh Gebeyehu, waxaana sidoo kale xilka Guddoomiyenimada IGAD lagu wareejin doonaa Kenya. Kursiga Xoghayaha Guud ee IGAD ayaa waxaa dooneysay inay qabato Soomaaliya,waxaana u sharaxnaa...
Al-shabaab oo la sheegay in ay u dhaqamayaan sidii dowlad oo kale
Mjournal :-La Taliyihii hore ee Amniga Qaranka ee Madaxweyne Farmaajo Xuseen Macalin ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bilaabeen inay dowladeeyaan oo ay soo saaraan awaamiir toos ah oo ka dhaqan gashay Muqdisho iyo gobolada dalka. Xuseen Macalin oo wareysi siiyay Radio Kulmiye ayaa...
Mjournal :-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Ruushka kana qeyb-galaya Shirka Iskaashiga Ruushka iyo Afrika ayaa waxaa uu kulan gaar ah la qaatay dhigiisa dalkaas Vladimir Putin. Kulanka ayaa labada Madaxweyne ay uga...
Shirkadda DP World oo uu saameeyey Go’aankii Jabuuti
Mjournal :-Shirkadda DP WORLD ee dalka Imaaraadka ayaa sheegtay in muranka iyo dacwaddii dhexmartay iyaga iyo dowladda Djibouti ee ku aadanaa maamulka Dekedda Doraaleh, ay taasi dhaawac gaarsiisay shirkadda, isla markaana ay ku adkaatay inay bangiyada caalamka ka hesho deyn ay ku...